Tips सल्लाहहरू तपाईंको शारीरिक र भावनात्मक सन्तुलनको ख्याल राख्न बेजिया
दिन प्रतिदिन हामी बस्ने व्यस्त गतिले तपाईलाई भावनाको ख्याल राख्न समय नपाएको जस्तो महसुस गराउन सक्छ। तपाईंसँग वास्तवमै समय छ वा छैन, तपाईंले गर्नुपर्दछ। तपाईंको भावनात्मक सन्तुलन तपाईंको विचारहरूमा निर्भर गर्दछ, तर तपाई आफैले लिने निर्णयहरूमा पनि। तसर्थ, यदि तपाइँ सामान्यतया धेरै काम गर्नुहुन्छ र थोरै आराम गर्नुहुन्छ भने, समय आइसकेको छ कि तपाइँ परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ तपाईंको जीवनलाई उत्तमको लागि बदल्नको लागि।
अर्को हामी तपाईलाई केहि सल्लाह दिदैछौं ताकि तपाई आफैंलाई भावनात्मक हेरचाह गर्न सिक्नुहोस्, यस तरिकाले तपाईसँग व्यस्त जीवन छ भने पनि, तपाईलाई रमाइलोको क्षणहरू पाउनुहुनेछ जुन तपाईको ब्याट्रीलाई रिचार्ज गर्न मद्दत गर्दछ तपाईलाई चाहिने जति रिचार्ज गर्न।
1 व्यायाम गर्नुहोस्
2 समय सकियो
3 खाली समय वा छुट्टी
4 पुस्तकहरू पढ्नुहोस्!
यदि तपाई अफिसमा धेरै समय खर्च गर्नुहुन्छ भने तपाईले हरेक दिन व्यायाम गर्नु पर्छ किनकि आन्दोलन नै जीवन हो। खेल र अन्य शारीरिक गतिविधिहरूले तपाईंको लामो समयसम्म स्वस्थ र बाँच्ने सम्भावनाहरू सुधार गर्दछ। यो जान्नु महत्त्वपूर्ण छ कि नियमित व्यायामले शरीरका धेरै प्रणालीहरू राम्रोसँग काम गर्दछ।
व्यायाम गर्न आफ्नो कामको समय प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुहोस् र तपाईं आफ्नो परिवारसँगै राती तपाईंको खाली समय बिताउने मौका पाउनुहुनेछ।
अफिस तपाईको शरीर र दिमागका लागि उत्तम स्थान हुँदैन। ताजा हावा सास फेर्न र सूर्यको आनन्द लिन समय खोज्ने प्रयास गर्नुहोस्। सूर्यको प्रकाशले तपाईंको छाला र शरीरलाई भिटामिन डी समृद्ध बनाउँदछ जुन तपाईंको स्वास्थ्यको लागि अत्यन्त उपयोगी छ। ताजा हावामा लामो पैदल हिसाबले तपाईंको एकाग्रतामा सुधार ल्याउँछ र तपाईंलाई खुशी पार्दछ।
थप रूपमा, तपाईसँग टेलिभिजन वा कम्प्युटरको अगाडि समयलाई प्रतिस्थापन गर्ने अवसर पाउनुहुनेछ र हिँडेर र अन्य चीजहरू गर्नुहोस् जुन तपाईंको शरीरलाई सार्दछ।
खाली समय वा छुट्टी
यदि तपाईं अफिसमा आफ्नो जीवन बिताउन थकित हुनुहुन्छ भने, छुट्टीको समय राम्रोसँग प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। जो यात्रा गर्न मन पराउँछन् उनीहरूले विभिन्न उत्तम र भव्य ठाउँहरूको भ्रमण गर्न सक्दछन्। थप रूपमा, त्यहाँ तपाईंको घर बिदा कसरी खर्च गर्ने भन्ने बारेमा धेरै उपयोगी सल्लाहहरू छन्, विशेष गरी यदि तपाईं यात्रा खर्च गर्न सक्नुहुन्न भने। त्यहाँ पार्कहरू, संग्रहालयहरू, पौंडी पोखरी र खेल मैदानको एक विस्तृत विविधता छ। तपाईं आफ्नो घर पनि नविकरण गर्न सक्नुहुनेछ वा साथीहरूसँग भेट्नुहुनेछ।
सबै workaholics हरेक दिन काम मा तनाव सामना। यो नकारात्मक ऊर्जा संचय र विभिन्न स्वास्थ्य विकारहरूको कारण दिन्छ। तनाव कम गर्ने उत्तम तरिका मध्ये एक राम्रो किताब पढ्नु हो। जब तपाईं पुस्तक खोल्नुहुन्छ, तपाईं आफैंलाई अद्भुत साहित्यिक संसारमा आमन्त्रित हुन अनुमति दिनुहुन्छ जसले तपाईंलाई दैनिक तनाव र नकारात्मक विचारहरूबाट उम्कन मद्दत गर्दछ। मुख्य कुरा भनेको तपाईलाई धेरै अपील गर्ने किताब फेला पार्नु हो।
यदि तपाई बिरामी हुनुहुन्छ भने काम नगर्नुहोस्
जे होस् यो काममा जानको लागि लोभ्याउने छ जब तपाईं बिरामी हुनुहुन्छ, तपाईंले बुझ्नु पर्दछ कि यो तपाईं र तपाईंको सहकर्मी दुबैका लागि धेरै खतरनाक छ। धेरै वर्काहोलिकहरू यस्तो महसुस गर्छन् कि उनीहरूले टिमलाई तल झार्दै छन्, तर स्वास्थ्य जीवनमा शीर्ष प्राथमिकता हुनुपर्दछ। अवश्य पनि, यदि तपाईंलाई नराम्रो लाग्छ भने आफैंलाई काममा जान बाध्य नगर्नुहोस्, तपाईं जटिलता जोखिम गर्न सक्नुहुन्छ पछि।
फलस्वरूप, यसलाई पुन: प्राप्ति गर्न अझ गाह्रो हुनेछ। तपाईंको स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोस्, किनकि यो तपाईंको सफलता र खुशीको केन्द्रीय तत्व हो। थप रूपमा, तपाईले याद गर्नुपर्दछ कि पहल दण्डनीय छ।
ध्यान गर्नुहोस्, आरामदायी नुहाउने तयारी गर्नुहोस् ... र तपाईंको शारीरिक र भावनात्मक सन्तुलन फेला पार्नुहोस्!
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » मनोविज्ञान र जोडी » Tips सल्लाहहरू तपाईंको शारीरिक र भावनात्मक सन्तुलनको ख्याल राख्न
Nantes, फ्रान्स मा के हेर्ने
गर्मीमा पेटको समस्याबाट कसरी बच्ने